Sales forecasting ဆိုတာ ဘာလဲ? - Better Version
Sales forecasting ဆိုတာ ဘာလဲ?
September 10, 2020 2021-07-14 19:30
Sales forecasting ဆိုတာ အလွယ်ဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းတာပါ။
Sales forecasting မလုပ်ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ?
ဈေးကွက်ရဲ့ ဝယ်လိုအားနဲ့ အခြေ‌နေကို မတွက်ထားတဲ့အတွက် ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ရောင်းမကုန်ဘဲ stock တွေ အများကြီး ပိုနေတာမျိုး၊ တစ်ခါတလေ အရေတွက်နည်းနည်းပဲ ထုတ်ထားမိလို့ မလောက်တော့ဘဲ နောက်မှ အသည်းအသန် ထပ်ထုတ်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီ အခြေနေနှစ်ခုလုံးက လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီလို over produce, under produce တွေ မဖြစ်အောင် sales forecasting လုပ်ရတာပါ။ တကယ်တော့ Sales forecasting လုပ်တာဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ ရှိတဲ့ဌာန အားလုံးအတွက် guideline ချပေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Sales forecasting လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရမလဲ?
Sales forecasting လုပ်တာဟာ ကိုယ့် လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအများကြီး ရှိပါတယ်။
၁) မှန်ကန်တဲ့ sales target တွေ ချနိုင်မယ်။
Forecasting လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ဒေတာအပေါ်မူတည်ပြီး revenue တွေ တွက်ချက်ပြီး အရောင်းအဖွဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ target တွေချနိုင်မယ်။ ဒီ target ပြည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြိုသိနိုင်မယ်။
၂) ဘက်ဂျက်ကို သေချာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်။
ထုတ်မယ့် အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို အသက်သာဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ တွက်ချက်နိုင်မယ်။
၃) Resource တွေကို စနစ်တကျ ခန့်ခွဲနိုင်မယ်။
ဥပမာ အခုရေ တစ်သောင်းထုတ်ရမယ်ဆိုပါစို့။ ဒီအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွင်းမှာ အပြီးထုတ်ဖို့ resources တွေ ဘယ်လောက်လိုမလဲ? ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ လူ ဘယ်နှစ်ယောက်လိုမလဲ? အရောင်းပိုင်းမှာ လူဘယ်လောက်လိုမလဲ? ဖြန့်ချိရေးမှာရော ဘယ်လောက်လိုမလဲ? ဒါတွေကို တိတိကျကျ စီစဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Forecasting လုပ်တဲ့ဆိုတာ Art နဲ့ Science ကို ပေါင်းထားတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါက ဘာကို ပြောချင်တာလည်းဆိုတော့ Sales Forecasting လုပ်တဲ့အခါ စနစ်တကျ စုဆောင်းထားတဲ့ ဒေတာတွေအရလည်း ဆုံးဖြတ်ရသလို ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အရည်အသွေးတွေ အရလည်း ပေါင်းပြီး လုပ်ရတာမျိုးပေါ့။
Sales forecasting လုပ်တဲ့အခါ Short term, Medium term နဲ့ long term ဆိုပြီး ရှိလေ့ရှိပါတယ်။ Short term ဆိုတာကတော့ သုံးလလောက်အတွက်ကို ကြိုပြီး ခန့်မှန်းတာပါ။ Medium term ကတော့ တစ်နှစ်နဲ့ အထက်ဖြစ်ပြီး Long term ကတော့ သုံးနှစ်နဲ့ အထက်ပါ။
ဒီလို Sales forecasting လုပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
၁) Statistical Method
ဒါကတော့ အရင်က ဒေတာတွေ, အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲချက်တွေအရ ခန့်မှန်းတွက်ချက်တာပါ။
၂) Observation based Method
ဒီနည်းကတော့ ကိုယ့်ဝယ်သူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာပြီး တွက်တဲ့နည်းပါ။
၃) Survey or focus group Method
ကိုယ့်ရဲ့ ဝယ်သူတွေထဲက တစ်ချို့ကို မေးခွန်းတွေမေးမြန်းပြီး ရလာတဲ့ အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး တွက်တာပါ။ တကယ့် လက်တွေ့မှာ ရောင်းနေတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို ပြန်မေးတာမျိုးလည်း ရပါတယ်။
၄) Analogy Method
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ ဒေတာတွေပေါ် အခြေခံပြီး တွက်တာပါ။
၅) Judgement Method
ဒါကတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းပေးတဲ့နည်းပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် sales forecasting နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်လေး တီးမိခေါက်မိပြီလို့တော့ ထင်ပါတယ်။
အရောင်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်တန်းများ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ Better Sales Mastery Series ရှိပါတယ်။ သင်တန်းအသေးစိတ်ကို သိရှိဖို့ မက်ဆေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်း 09 424 638 38 , 09 420 065 267 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
#WaysToIncreaseSalesVolume #BetterVersion #BetterSalesStrategist #MakeYourProgress